दशैमा पाएको दक्षिणालाई एसो गर्नुहोस् नत्र का,र,बाहिमा पर्नुहोला सचेत रहनुहोस् !!:: Mero Desh
Published on: २९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०७:०५
दसैँमा टीकाको जति महत्त्व छ, त्यति नै दक्षिणाको पनि । ठुलाबडाको हातबाट आशीर्वाद टीका ग्रहण गरिसकेपछि दक्षिणाको रूपमा नगद पैसा पाइन्छ । जुन तपाईँले पनि पाउनु भयो होला । वा पाउँदै हुनुहुन्छ । याद गर्नु होस्, अब तपाईँले पाउने पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने ?
नोटको सुरक्षा गर्न नोटलाई सकभर वालेट वा पर्समा नपट्याई कन राख्नुहोस् । सकभर नोटमा कुनै पनि प्रकारको रङ नदल्नु होस् । नोटमा जथाभाबी लेख्ने, केरमेट गर्ने वा स्टिच गर्ने पनि नगर्नुहोस् । नोटलाई ज,लाउने वा च्यात्ने जस्ता गैर ऐन विपरीत का काम झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् ।
यो पनि ,, दक्षिणाको महत्त्व : पैसा दिने चलन कहिलेबाट सुरु भयो ?​थाहा छ, यस्तो गतिविधि गरेमा तपाई जे,ल समेत जानु पर्ने हुन सक्छ । नोटको दुरुपयोग वा जथा,भा,बी प्रयोगलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऐनमा नै व्यवस्था गरेर दण्डनीय बनाएको छ । मुलुकी अ,प,राध संहिता २०७४ ले नोटमा फो,होर गर्ने
जथाभाबी केरमेट गर्नेलाई ३ महिना जेल र ५ हजार जरिवाना को व्यवस्था गरेको छ । प्रायः सुकिला र कटकटिएका नयाँ नोट दसैँ तिहारमा नै प्रयोगमा ल्याइन्छ । फेरि नोटको हिफाजत को चुनौती पनि यही दसैँ–तिहारमा नै बढी हुने गर्छ । किनकि दसैँ तिहारमा दक्षिणाका रूपमा प्रयोग गरिने नोटमा अबीर,
केशरी, तथा पानी छर्कने चलन छ । सकभर यसो नगर्नुहोस् ।बरु दक्षिणास्वरुप प्राप्त गर्ने रकमलाई हिफाजतसाथ राख्नुहोस् र कुनै राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् । ता कि यो लगानीले तपाईँको भविष्य उज्ज्वल हुन सकोस्।